N'ụwa taa, ọla-echekwa na-ike dakwasịrị iji nye ekere òkè ịzụ ahịa ahụmahụ ahịa - onye ahụ ga-abụ visual, informational na ụtọ. Ha na-ọkụ n'ahụ ka iru ahịa mmekọrịta, ndị isi bụ ekweghị ka egbutu-akwụ ụgwọ, ọ bụ na-enye akụkọ na mma uche ziri ezi ka ọla. Digital signage nwere ike kwụpụ aka ọla-echekwa site n'inye irè na na mmekọrịta ngwọta. Specialy na uzo Ikanam ngosi, enye a zuru okè ngosi ngwọta maka ụlọ ahịa ọla.
Ibe gị Sales
Ọ bụ a nwapụtaworo na eziokwu na ngosipụta mbo mbuli ahịa. Na dijitalụ signage, ị nwere ike ime na, na nke ahụ bụ nanị mmalite. Ọ na-enyere ị na-ọzọ akara nke asịwo shopping omume.
Dị ka TV, na-ebipụta, na redio, Ikanam video signage grabs ntị na nnọọ nkọ na doo anya. The elu àgwà ngosipụta na-enwu gbaa na agba nwere ike na-agụnye ọcha dị ka ozi ọma na-azụ ma online video na-enye ohere marketers ga-esi site na ụzụ na-jikọọ na ahịa.
Ozi-apụghị ileghara anya
Na dijitalụ signage, ị nwere ike welie gị ahịa site na-ewere ihe na-achịkwa nke gị ahịa 'na-azụ ahịa omume, site na-ekwurịta okwu ọmụma, ozi, na jidere ha ntị enweghị gwụsịrị. Na-enyemaka nke na agba, videos, crazy ndịna, ihe eserese, digital signage edebe gị ozi gị ahịa 'uche-oghere.
Web Njikọta na kwesịrị ekwesị accessibility
Digital signage nwere ike metụtara na internet na-achịkwa na mpaghara ma ọ bụ remotely. I nwere ike na-agụnye Twitter faili ntanetịime, idụhe ọnọdụ, video ọdịnaya, ozi ọma na-azụ, na blog post na ngosipụta. Ka ihe atụ, ọ bụrụ na ikanam ngosi bụ na uwe retail showroom, mgbe ahụ, ụfọdụ ejiji Atụmatụ ma ọ bụ trendy uwe videos nwere ike gosiri ịzọpụta ahịa si oge.
Mmetụta ịzụ mkpebi
Na ekele na-eru gị ezubere iche na-ege ntị, mmekọrịta na ahịa nke ọma ma na-amụba ihe revenue dị mkpa. Na, maka na, digital ngosi bụ a zuru okè ngwọta na-emetụta ịzụ mkpebi.
Ka mpi a nke oge a oge nke ọla, ulo oru ga-ekwe nkwa na ndị ahịa ha 'ahụmahụ na gị retail store kwesịrị both- nnukwu na mma. Site n'enyemaka nke ahaziri ikanam Video signage echichi, otu onye nwere ike izute ha azụmahịa 'mkpa.